Anhydrous လူမီနီယမ် Chloride
hot ရောင်းချခြင်း! အဆင့် Powder မဂ္ဂနီစီယမ်ဆာလဖိတ် Monohydrate Feed
19-05-13 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
မော်ဒယ် NO.:98% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်: 98% အမျိုးအစား: မဂ္ဂနီစီယမ် sulfate ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: Powder အဆင့်နျ Standard: အဆင့်ပို့ဆောင်ရေးအထုပ် Feed: 40kg Specification: 150mesh မူလအစ: တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းဖျေါပွခကျြကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအထူးမဂ္ဂနီဆီယမ်ဆာလဖိတ် heptahydrate ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သောသည်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်တက်နိုင်ဖြစ်ပါသည် 50000tons အီးမှ ...
က ISO လက်မှတ် Ammonium ဆာလဖိတ် 21.5% နှင့်အတူတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်
ထုတ်လုပ်တိုက်ရိုက်က ISO လက်မှတ် Ammonium ဆာလဖိတ်နှင့်အတူ 21.5% အခြေခံပညာအင်ဖိုမော်ဒယ် NO .: 21.5% ဖြန့်ချိအမျိုးအစား: လျင်မြန်စွာဓာတုက Character: ဓာတုကြားနေအမျိုးအစား: ဆွေး Specification: 21.5% ခွဲခြား: မြေဆီလွှာအပေါ်အော်ဂဲနစ်မြေသြဇာကူးစက်: ဇီဝကြားနေပုံပန်းသဏ္ဍာန်: Powder အရွယ်အစား:2MM မူလ:...
ထုတ်လုပ်သူထောက်ပံ့ရေး High Quality မဂ္ဂနီစီယမ်ဆာလဖိတ်
1) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်စျေးနှုန်းများနှင့်ဆက်စပ်သောသင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင် 12hours အတွက် replied လိမ့်မည်။ 2) ။ ကောင်းပြီ-လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်စွာအင်္ဂလိပ်၌သင်တို့၏စစ်ကြောင်းဖြေဆိုရန်ထမ်းခံစားခဲ့ရသညျ။ 3) ။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးမြင့်မားအာမခံရှိသည်။ 4) ။ နမူနာအမိန့်သေးငယ်တဲ့အမိန့် 3-5working ရက်ပေါင်း,3အလုပ်လုပ်ရက်အတွင်းကိုအပ်နိုင်ပါတယ် ...
Weifang JS ဓာတု CO ။ , LTD မှ
19-05-05 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
Weifang အား JS ဓာတု Co. , Ltd မှကျနော်တို့မွန်ဘိုင်းအတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုငျဆန္ဒရှိ, အောက်ပါအတိုင်း, မွန်ဘိုင်း, အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးစိတ်ကိုပြပွဲသို့တက်ရောက်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ ပြပွဲအမည်: CHemspec အိန္ဒိယလိပ်စာ: NSE, Goregaon (E), မွန်ဘိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း Maharashtra ပြည်နယ်, အိန္ဒိယလျ: +91 226 645 0123 ဖက်စ်: +91 226 645 0101 Booth မျှ: E42, ခန်းမ 1, ဘုံဘေပြပွဲ ...
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်အဓိကအားဖြင့်လေးလေးနက်နက်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြား clients များမြင့်မားသောချီးမွမ်းခြင်းကိုကျော်နိုင်ငံပေါင်း 30 နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှတင်ပို့နေသည်ကပြည်ပမှာအတွက်အလွန် salable ဖြစ်ပါတယ်။
hot ရောင်းချခြင်း! အဆင့် Powder မဂ္ဂနီစီယမ် Sul Feed ...
က ISO လက်မှတ်တစ်ဦးနှင့်အတူတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ် ...
လိပ်စာ: 10 / F ကို BLD6#, ဘဏ္ဍာရေးပလာဇာ, No.4899 Dongfeng အရှေ့ St.Hi-Tech မှ, ဖွံ့ဖြိုးရေးဇုန်, Weifang အားရှန်ဒေါင်း, တရုတ်
30% Polyaluminium Chloride , Hypophosphorous အက်ဆစ် , ရေကုသမှု polymer , ဆိုဒီယမ် Stannate , Molecular ဆန်ခါကာလဖြစ်ပါသည် , Pac For Water Treatment,